【 နိုင်ငံတကာဆောင်းပါး 】 ယူကရိန်း-ရုရှား တင်းမာမှုတွင် သိသင့်သောအချက်များ | Opinion Leaders
【 နိုင်ငံတကာဆောင်းပါး 】 ယူကရိန်း-ရုရှား တင်းမာမှုတွင် သိသင့်သောအချက်များ
နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တွင် ရုရှားက စစ်အင်အားအများပြားချထားသောကြောင့် မော်စကိုက ယူကရိန်းကို လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များ သို့မဟုတ် လများအတွင်း ကျူးကျော်မည့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်စေပြီး ယူကရိန်းနှင့် ရုရှားအကြား တင်းမာမှုများ အမြင့်မားဆုံးရောက်နေသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။
ရုရှားသည် ယူကရိန်းကို မကျူးကျော်မီ မတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေကြောင်း ယူကရိန်းက သတိပေးထားပါတယ်။ယူကရိန်းကို နောက်ထပ်ကျူးကျော်ရန်စသည့်လုပ်ရပ်များ မလုပ်ရန်လည်း အနောက်နိုင်ငံများက မကြာသေးမီ ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးနေပါတယ်။
ကရင်မလင်ကလည်း ၎င်းတို့သည် တိုက်ခိုက်ရန် ကြံစည်ထားခြင်းမရှိကြောင်း မြောက်အတ္တလန်တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့ - NATO က ယူကရိန်းကို လက်နက်များနှင့် စစ်သင်တန်းများ ပိုမိုထောက်ပံ့လာခြင်းအပါအဝင် အကူအညီများသည် ရုရှား၏ အနောက်ဘက်နယ်စပ်ကို ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။။
အခြေအနေမှာ ရှုပ်ထွေးနေသော်လည်း မိမိတို့သိထားသည့် အသေးစိတ်များကို အောက်တွင်ဖော်ပြလိုက်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် NATO က ယူကရိန်းပတ်ဝန်းကျင်မှ တပ်များလှုပ်ရှားမှုနှင့် စုရုံးမှုသည် ထူးခြားနေကြောင်း ပြောပါတယ်။
ပူတင် က ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်လျှင် ပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များ ဖြစ်လာမည်ဟု အမေရိကန်သမ္မတ ဘိုင်ဒင်နှင့် အနောက်နိုင်ငံများက သတိပေးနေစေကာမူ အင်အားတစ်သိန်းအထိ များပြားသော ရုရှားတပ်များသည် ယူကရိန်း နယ်စပ်တွင် စုရုံးနေပါတယ်။ရုရှားသည် ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်သည့် စစ်ပွဲကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် လုပ်နိုင်ကြောင်းလည်း အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေးအသိုက်အဝန်းက ဆိုပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းက ဂြိုဟ်တုမှ ရိုက်ကူးထားသောပုံများတွင် အလိုလျှောက်ပစ် အမြောက်များ၊ တင့်ကားများနှင့် ခြေလျှင်တပ် တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်များအပါအဝင် ရုရှားစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများသည် နယ်စပ်မှ ၁၈၆ မိုင်အကွာ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းတွင် လှုပ်ရှားနေကြောင်း ပြသနေပါတယ်။သို့သော် အနောက်နိုင်ငံများက စွပ်စွဲသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုကို အထောက်အကူပြုသည့် သတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်ကိုသာ လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ပါတယ်။။
ရုရှားနိုင်ငံ၏ စစ်စခန်းအများအပြားသည် ကျယ်ပြန့်လှသော နိုင်ငံ၏အနောက်ပိုင်းတွင်ရှိနေပါတယ်။သမိုင်းအရ နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းသည် ခြိမ်းခြောက်မှုများလာနိုင်ခြေအများဆုံး နေရာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနှင့် နယ်စပ်ဖြစ်သော နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် ဆောင်းရာသီ ပုံမှန်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထိုလေ့ကျင့်မှုတွင် တပ်အင်အား တစ်သောင်းပါမည်ဟု ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် ရုရှားနှင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေသည့် ယူကရိန်း အရှေ့ပိုင်းဒေသ ဒွန်ဘက်စ်ဟု လူသိများသော ဒွန်နက်စ်နှင့် လူဟန့်စ်ကို ရုရှား ကျောထောက်နောက်ခံပြု ခွဲထွက်ရေးသမားများက ၂၀၁၄ ခုနှစ်က စတင်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ထိုဒေသတွင် ရုရှားတပ်များလည်းရှိနေပြီး ယူကရိန်းက ထိုဒေသကို ယာယီသိမ်းပိုက်ခံဒေသဟု ဖော်ပြသော်လည်း ရုရှားက ထိုအချက်ကို ငြင်းဆိုသည်။
ပဋိပက္ခ၏ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာသည် ၅ နှစ်အတွင်း လှုပ်ရှားမှုမရှိသလောက်ဖြစ်သော်လည်း သေးငယ်သော တိုက်ပွဲများနှင့် စနိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများ မကြာခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရုရှားလိုလားသော ခွဲထွက်ရေးသမားများ၏ စခန်းများကိုတိုက်ခိုက်ရန် ယူကရိန်းတပ်များက တူရကီလုပ် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကို အောက်တိုဘာလက ချထားလိုက်သောအခါ ရုရှားနိုင်ငံကို ဒေါသထွက်စေပါတယ်။
ရုရှားသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်က သိမ်းယူထားသော ယူကရိန်းပိုင်နက် ခရိုင်းမီးယားရှိ ရေတပ်တွင်လည်း တပ်အင်အား သောင်းချီချထားပါတယ်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသော ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်သည် ရုရှားပြည်မကြီးသို့ ဆက်သွယ်ထားသည့် ကုန်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခင် ဆိုဗီယက်ယူနီယံနိုင်ငံဟောင်းများဖြစ်ကြသော ရုရှားနှင့် ယူကရိန်းအကြား တင်းမာမှုမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူစာချုပ်မှ စတင်ပါတယ်။ထိုစဉ်က ရုရှားလိုလားသော သမ္မတ ဗစ်တာ ယန်နုကိုဗစ် က မော်စကို၏ ဖိအားကြောင့် ဆွေးနွေးပွဲများ ရပ်ဆိုင်းလိုက်သောအခါ ယူကရိန်းမြို့တော် ကိဗ်တွင် ဆန္ဒပြပွဲများ ရက်သတ္တပတ်အတန်ကြာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လတွင် ရုရှားက ရုရှားစကားပြောသော နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန် အကြောင်းပြကာ ယူကရိန်းတောင်ပိုင်းရှိ ရုရှားသစ္စာခံလိုသော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ကျွန်းဆွယ် ခရိုင်းမီးယားကို နယ်ချဲ့လိုက်ပါတယ်။ပထမတွင် ရုရှားစကားပြောသောတပ်သား ထောင်ပေါင်းများစွာ ခရိုင်းမီးယားသို့ ဝင်လာပါတယ်။နောင်တွင် မော်စကိုက ထိုတပ်များသည် ရုရှားတပ်များဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ရက်ပိုင်းအတွင်း ရုရှားက ထိုနယ်ချဲ့ခြင်းကို လူထုဆန္ဒခံယူပွဲဖြင့် အပြီးသတ်သော်လည်း ထိုဆန္ဒခံယူပွဲသည် အတုအယောင်ဖြစ်ပြီး တရားမဝင်ကြောင်း ယူကရိန်းနှင့် အနောက်နိုင်ငံများက ပြောပါတယ်။
ထို့နောက် မကြာမီ ယူကရိန်း၏ ဒွန်နက်စ်နှင့် လူဟန့်စ်မှ ရုရှားလိုလားသော ခွဲထွက်ရေးသမားများကလည်း လွတ်လပ်ရေးကြေညာသောကြောင့် ပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲများ လအတန်ကြာဖြစ်ပွားပါတယ်။ပြင်သစ်နှင့် ဂျာမဏီက ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသောကြောင့် မော်စကိုနှင့် ကိဗ်အကြား ၂၀၁၅ ခုနှစ်က မင့်စ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသော်လည်း ထိုအပစ်အခတ်ရပ်စဲမှုကို အကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖောက်ကြပါတယ်။။
ကုလသမဂ္ဂ၏ စာရင်းများအရ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လနောက်ပိုင်းတွင် ထိုပဋိပက္ခကြောင့် အရပ်သားသေဆုံးမှု ၃,၀၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ခရိုင်းမီးယားနှင့်ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းမှ ရုရှား၏ လုပ်ရပ်များကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂက လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရရှားစီးပွားရေးကဏ္ဍများအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှု အများအပြားချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ယူကရိန်းသည် နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းတွင် တင်းမာမှုများဖြစ်အောင် လုပ်နေကြောင်းနှင့် မင့်စ်သဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်ကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားက ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်ရန် ကြံစည်နေသည်ဆိုသည့် စွပ်စွဲချက်ကို ရုရှားကငြင်းဆန်ပြီး ရုရှားသည် မည်သူ့အတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုမျှမဟုတ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ပိုင်နက်အတွင်း တပ်များကို ရွှေ့ပြောင်းခြင်းသာဖြစ်သောကြောင့် မည်သူမျှမစိုးရိမ်သင့်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ယူကရိန်းကို NATO က လက်နက်အရ၊ လေ့ကျင့်ရေးအရနှင့် တပ်အင်အားအရ ထောက်ခံမှုကြီးမားလာခြင်းသည် ၎င်းတို့၏လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရုရှားကမြင်ပါတယ်။ယူကရိန်းသည် ဒွတ်ဘတ်စ်ဒေသကို ပြန်လည်သိမ်းယူရန်အတွက် စစ်အင်အားတိုးချဲ့နေသည်ဟုလည်း ရုရှားက စွပ်စွဲသော်လည်း ယူကရိန်းက ထိုအချက်ကို ငြင်းဆန်ပါတယ်။
ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင်ကလည်း NATO အဖွဲ့ အရှေ့ဘက်သို့ ရုရှားနယ်စပ်အထိ ချဲ့ထွင်ခြင်းကို ပိတ်ပင်သည့် တရားဝင်စာချုပ်တစ်ခုကို တောင်းဆိုပြီး အနောက်နိုင်ငံများသည် ယခင်နှုတ်အားဖြင့် သဘောတူညီချက်များကို မလိုက်နာကြောင်း ပြောပါတယ်။
ယူကရိန်းသည် NATO ၏ လက်နက်တပ်ဆင်မှုများ ပိုမိုရရှိလာသည့် စိုးရိမ်မှုများအကြား ယူကရိန်းတွင် ဒုံးကျည်စနစ်ကဲ့သို့သော NATO ၏ အဆင့်မြင့်လက်နက်များချထားခြင်းက ရရှားအတွက် အနီရောင်စည်းကို ဖြတ်ကျော်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရုရှားသမ္မတ ပူတင်ကလည်း ပြောကြားထားပါတယ်။
အမေရိကန်နှင့် အခြား NATO နိုင်ငံများက ယူကရိန်းကို လက်နက်များနှင့် စစ်ဘက်အကြံပေးများ ပေးပို့နေကြောင်း ကရင်မလင်ပြောခွင့်ရသူ ဒီမီထရီ ပက်စ်ကော့ က နိုဝင်ဘာလတွင်ပြောပါတယ်။“ဒီလိုလုပ်တာတွေကြောင့် နယ်စပ်ကအခြေအနေက ပိုမိုဆိုးရွားသွားတယ်” ဟုလည်း သူကပြောပါတယ်။
အမေရိကန်နှင့် NATO မဟာမိတ်များ ယူကရိန်းတွင် ခြေလှမ်းမပြင်ပါက မော်စကိုအနေဖြင့် ၎င်း၏ တရားဝင်သော လုံခြုံရေးအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန် မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်း ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်ဟုလည်း ရုရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆာဂျေ လက်ဗ်ရော့ က သတိပေးထားပါတယ်။
ယူကရိန်းအနေဖြင့် NATO နှင့် ပိုမိုနီးကပ်သော ဆက်ဆံရေးထူထောင်ရန် ရွေးချယ်ပါက မော်စကိုအနေဖြင့် တားဆီးခွင့်မရှိကြောင်း ယူကရိန်းအစိုးရက ပြောပါတယ်။
“ယူကရိန်းနှင့် NATO ပိုမိုနီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို ရုရှားက မတားဆီးနိုင်သလို ဆက်စပ်ဆွေးနွေးပွဲများအတွက်လည်း ပြောပိုင်ခွင့်မရှိပေ” ဟု ယူကရိန်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ပြောပါတယ်။
NATO ၏ အမြင်
NATO ၏ မိတ်ဖက်ဖြစ်သော ယူကရိန်းကို ထပ်မံကျူးကျော်ပါက ကြီးမားသောတန်ဖိုး ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း NATO အဖွဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဂျန် စတော့တန်ဘတ် ပြောပါတယ်။
“စီးပွားရေးအရေးယူတာ၊ ဘဏ္ဍာရေးအရေးယူတာ၊ နိုင်ငံရေးကန့်သတ်တာ ကျနော်တို့မှာ ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်း အများကြီးရှိတယ်” ဟု ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် သူကပြောပါတယ်။
ရုရှားက ယူကရိန်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ကျူးကျော်ပြီးနောက် NATO အဖွဲ့သည် အရှေ့ပိုင်းမဟာမိတ်နိုင်ငံများ၊ ဘောလ်တစ်နိုင်ငံများ၊ လတ်ဗီးယားနှင့် ပင်လယ်နက်ဒေသတွင် တိုက်ပွဲဝင်ရန် အသင့်အနေအထားရှိသော တပ်များကို ချထားလိုက်ကြောင်း စတော့တန်ဘတ် က ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်နှင့် မဟာမိတ်များသည် ယူကရိန်းကို ရုရှားက ကျူးကျော်ပါက ပြတ်ပြတ်သားသား တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်သမ္မတ ဘိုင်ဒင် က ယူကရိန်း သမ္မတ ဗိုလိုဒီမာ ဇီလန်စကီး ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ဖုန်းဆက်သွယ်မှုအတွင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယူကရိန်းကို ရုရှားကျူးကျော်မှု တားဆီးရန်အတွက် ဥရောပအရှေ့ပိုင်းတွင် စစ်ရေးစွမ်းရည်တိုးချဲ့ရန် သမ္မတက ဆုံးဖြတ်ပါက နည်းလမ်းများကိုချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိနှစ်ဦးပြောကြားပြီး၊ သို့သော် လတ်တလောတွင် သံတမန်ရေးနှင့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအပေါ်တွင်သာ အာရုံစိုက်နေကြောင်းလည်း ထိုအရာရှိများပြောပါတယ်။
Ref : CNN : Tensions are high on Ukraine’s border with Russia. Here’s what you need to know
Ref : CNN : Tensions are high on Ukraine’s border with Russia." data-share-imageurl="">